Iiraan Xiyyaara waraanaa biyya keessatti oomishuu jalqabde - NuuralHudaa
NUURALHUDAA - Soora Qalbii Muslimaa
Iiraan Xiyyaara waraanaa biyya keessatti oomishuu jalqabde
On Nov 3, 2018 21
Xiyyaarri waraanaa Iiraan oomishuu jalqabde kun, dizaayinii irraa jalqabee hanga oomishaatti 100% teeknolojii fi ogeeyyota biyya keessaatiin tahuun beekameera. Dabalataanis Xiyyaarri waraanaa kun hammayyaawaa fi teeknolojii haaraya kan qabu tahuu gabaasni arganne ni mul’isa.
Faawundeeshiniin Dubartoota Rufeydaa Barattoota 168 sadarkaa…
Hoggantoonni Waraana Suudaan Muummicha Ministeeraa aangoo…
Suudaan keessatti fonqolchi mootummaa geggeeffamaa jiraatuu…
Iiraan August darbe Xiyyaara waraanaa biyya keessatti hojjachuu isii kan beeksifte yoo tahu, guyyaa hardhaa Xiyyarri jalqabaa humna qilleensa biyyattiitiif kennamee jira. Ministeerri Ittisa Iraan Amir Hatami akka jedhetti, Iiraan humna qilleensa biyyaatiif xiyyaarota hanga barbaachisan dhiheenyatti oomishitee hujii irra kan oolchitu tahuu hime.
Nuuralhudaa	 May 19, 2022
Qaamman bishaanii keessa uumama lakkaawamnee hin dhumne hedduutu jira. Uumamni barruu tana keessatti ilaallus…
Iddoowwan Xayyaarri irra hin balaliine
Yaalii xiyyeeffannoo barattootaa dabaluudhaaf Chaayinaan godhaa jirtu
Prev	Next 1 of 105
May 20, 2022 sa;aa 4:57 pm Update tahe
Nuuralhudaan Miidiyaa Tajaajila hawaasa Muslimaatiif dhaabbate. wanti irratti xiyyeeffatee dalagu diin Islaamaa barsiisuudha. miidiyaa kanarraan Ulamaa’ileen Islaamaa gurguddoon heddu diin barsiisutti jiru. keessumattuu karaa saatalaayitiitiin tajaajilli hawaasa biyya keessa jiru dhaqqabu qooda guddaa qaba. Websaayitiin kunis namoota biyya alaa jiran tajaajiluuf qophaaye. namoonni Nuuralhudaa qunnamuu barbaaddan mail@nuuralhudaa.com irratti nuuf barreessaa.
Gorsa Haakimaa:Yeeroo Ifxaaraa Soomana akkamitti furuu…
Waa’ee Coronavirus fi COVID-19 Lakk. 3
Waa’ee Coronavirus fi COVID-19 Lakk. 2
Koroonaa-vaayras irraa hubannoof
Tana Quba Qabduu
Biyyoota maqaa jijjiiratan
Biyya Muslimoota hedduu fi aadaawwan islaamummaa…
Waa’ee Dhukkuba Kaansarii irraa kana beeytuu?
Website Design by: Abulkhayr